Faa’iidooyinka Cafimaad Ee Geedka Timirta! - Xogside-news Xogside
Home BARNAAMIJYADA CAAFIMAADKA Faa’iidooyinka Cafimaad Ee Geedka Timirta!
Faa’iidooyinka Cafimaad Ee Geedka Timirta!
Geedka timirtu waxa uu ka mid yahay geedaha ugu faca weyn adduunka. Geedkani dunida oo dhan waa uu ku fidsan yahay, waxaana uu soo saaraa midho waxtar u leh jidhka Aadamiga. Geedkan ayaa hodan ku ah fiitamiinnada iyo macdanta jidhku baahan yahay, kuwaasi oo kor u qaadaya caafimaadka qofka. Daraasad la sameeyay oo lagu daabacay mareegta (msn.com) Waxa uu dawo ka yahay cudurro badan isagoo nafaqo aad u sareeya siiya jidhka. Waxa halkan idiinku soo bandhigaynaa faa;iidooyin ay leedahay xididdada timirta. Geedka timirtu waxa uu ka kooban yahay jirridda, caleemaha, ubaxa, madaxa timirta iyo midhaha, marka lagu daro xididdada timirta ee ku xasiliya kuna xejiya geedka ciidda.
Xididadu waxa ay ku fidsan yihiin geedka hareerahiisa, waana mid si joogto ah loo
cusboonaysiiyo si ay geedka uga caawiso inuu helo nafaqo wanaagsan. Mid ka mid ah
shaqooyinka xididada timirta ayaa ah inay nuugaan biyaha iyo nafaqooyinka illaa uu geedka ka baxayo, taasoo xididdada ka dhigaysa inuu yeesho faa;iidooyin caafimaad oo aad u badan. Xidadu waxa ay nuugaan fiitamiinnada iyo macdanaha uu geedka timirtu quuto, maadaama la isticmaali jiray tan iyo wakhtiyadii hore, sidaa awgeed waxa lagu daweeyaa cudurro badan maadaama uu hodan ku yahay macdanta zinc, naxaas iyo macdano iyo fiitamiino kale oo jidhku u baahan yahay.
Warbixinta ayaaa cadaysay in xididdada timirtu ay caawiyaan daweynta baabasiirta waxaana ugu sababay macdanaha iyo fiitamiinada jidhka uu baahan yahay ee ku jira inkasta oo warbiixntu ay sheegtay inay tani u baahan tahay daraasad cilmiya oo intan ka badan. Saliidda xididka timirta laga sameeyo waxaa ku jira tocotrienol, oo ka tirsan bahda fiitamiinka E, antioxidant, kaasi oo awood u leh inuu maqaarka jidhka ka caawiya gabowga iyo xarriiqaha laablaabka iyo jactada jidhka ku dhaca.
Timaha waxa ay ka caawisaaa saliiddani wasakhda xad-dhaafka ah. Timuhu waxa ay u baahan
yihiin fitamiin A ; E oo milmi kara si ay u nafaqeeyaan xididada iyo madaxa, saliidda timirtu
waxa ay hodan ku tahay fiitamiin E, iyo antioxidant-ka Beta Carotene, oo jidhku u beddelo
fitamiin A oo waxtar u leh maqaarka. Ugu danbayna waxa ay ka caawisaa koritaanka timaha, saliidda xididka timirtu waxay yaraysaa timaha daata. Madaxana waxa uu ka ilaaliyaa waxyeelada qorraxda iyadoo ay hodan ku tahay
fitamiinka E iyo tocopherol, oo madaxaaga ka ilaalisa falaadhaha qorraxda. Saliidda timirta ayaa ah isha ugu weyn ee antioxidants -ka, iyo maaddooyinka nafaqeeyaha ah sida tocotrienols, tocopherols, carotenoids, phytosterols iyo squalene, kuwaas oo dhammaantood waxtar u leh timaha iyo jidhka guud ahaan.
Previous articleSababaha Dhimashada Malqabeenada Iyo Dadka Caanka Ah!
Next articleGuddoomiyaha Xisbiga Ucid Eng Faysal Cali Waraabe Oo Xoghayaha Arrimaha Bulshada U Magacaabay Hadliya Ismacil